﻿ बस्दाखेरी खुट्टा हल्लाउने बानी छ ? यसो गर्नुहोस्
बस्दाखेरी खुट्टा हल्लाउने बानी छ ? यसो गर्नुहोस्
केही मानिस बस्दाखेरी अनायासै खुट्टा हल्लाइरहन्छन् । धेरैजनाले यसलाई बानी मात्र भएको ठानेर बेवास्ता गर्छन् । तर, यो कुने बानी होइन, यो त रेस्टलेस सिन्ड्रोमको लक्षण हो ।
के हो यो सिन्ड्रोम, कसरी छुटकारा पाउने ?
खासमा यो एक स्नायु प्रणालीको रोग हो । खुट्टा हल्लाउँदा शरीरमा डोपामाइन हर्मोन आउन थाल्छ जसकारण व्यक्तिलाई घरिघरि हल्लाउन मन लाग्छ । डोपामाइनले सुखको अनुभूति दिलाउँछ ।
शरीरमा आइरनको कमी भएमा यो सिन्ड्रोम देखापर्छ । यसको असर ३५ वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूमा देखिन्छ । गर्भवती महिलाहरूमा डेलिभरीको अन्तिम दिनहरूमा हर्मोनमा परिवर्तन आएका कारण पनि यो समस्या देखिन्छ । अत्यधिक रक्सी सेवन गर्ने, रुघा र एलर्जीको औषधि खानेलाई पनि यो सिन्ड्रोमको सम्भावना बढ्छ ।
यो बानी र रोगबाट छुटकारा पाउनका लागि तपाईंको जीवनशैली राम्रो हुन्छ र त्यसबाहेक तपाईंले केही अन्य कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
रक्सी, क्याफिन र चुरोट खान छोड्नुहोस् । दिनदिनै पर्याप्त निद्रा लिनुहोस् र समयमै सुत्नुहोस् । सुत्नुअघि खुला हावामा टहल्नुहोस् । सुत्नुअघि कठिन व्यायाम नगर्नुहोस् । डुल्नुका अलावा स्ट्रेचिङ वा रिल्याक्सेसन व्यायाम गर्नुहोस् ।
नियमित योग गर्नुहोस्
योगमार्फत तपाईं अस्थिर गोडालाई आराम दिन सक्नुहुन्छ । हप्तामा दुईचोटि ९० मिनेटको योग गर्नुभयो भने राम्रो निद्रा लाग्छ र मूड पनि फ्रेस हुन्छ । रेस्टलेस लेग सिन्ड्रोम जस्ता समस्याबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने वृक्षमुद्रा लगायतका योगासन गर्नुहोस् ।
घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्
जाइफलमा अद्भुत सुगन्ध र गुण हुन्छ जसले स्नायु प्रणालीलाई शान्त पार्छ । राति सुत्नुअघि गाईको दूध तताएर त्यसमा अलिकति जाइफल हालेर पिउनुहोस् । यसले राम्रो निद्रा ल्याउँछ । सुत्नुअघि लेभेन्डर तेल, क्यामोमाइल तेललाई अंगुरको तेल वा बदामको तेलमा मिसाएर गोडामा मालिश गर्नुहोस् ।